Human Rights Watch fi miidiyaaleen addunyaa ajjeechaa Woyyaaneen Oromoo irratti raawwataa jirtu saaxilan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Human Rights Watch fi miidiyaaleen addunyaa ajjeechaa Woyyaaneen Oromoo irratti raawwataa jirtu...
Human Rights Watch fi miidiyaaleen addunyaa ajjeechaa Woyyaaneen Oromoo irratti raawwataa jirtu saaxilan
BBC, Al Jazeera, Reuters, AFP fi miidiyaaleen addunyaa biroos ibsa HRW irratti hundaayuudhaan gabaasa dhiyeessaniiru.
Mootummaan Itoophiyaa ajjeechaa fi ukkaamsaa wolirraa hin cinne Oromoo irratti geggeessaa jiraahcuu isaa Human Rights Watch-HRW saaxile. Gabsaani HRW kan ifa godhe guyyaa guyyatti humni woraanaa Woyyaanneen bobbaaste ummata ajjeesuu fi daandii irraa sassaabaa mana hidhaatti guuruu hujii godhatuu isaati.
Akka gabaasa HRW fi miidiyaalee addaddaatti Sadaasaa 12, 2015 eegalee humnoonni mootummaan bobbaase ummata hiriira baye irratti dhukaasu, ajjeesu; akkasumas jumlaadhaan ummata gara mana hidhaatti geessu. Mana hidhaattis hidhamtoonni gidiraa cimaaf kan saaxilaman ta’uu isaati gabaasni HRW kan agarsiisu. Namoonni hidhaman korreettiin gidiraan cimaan irra gayuu isaaniiti kan HRW’tti himani.
Namoota 200 ol ta’antu rasaasa mootummaan harca’e, erga fincilli Sadaasa 12 eegalee. Namoonni hidhaman mana murtiitti osoo hin dhiyeessin mootummaan itti cufee kan bira taa’utti jiru.
‘Humni federlaalaa Oromiyaa irra garagaluun tuffii daangaa hin qabne mootummaan mormii barattootaa, qoteebultootaa fi ummata mootummaa mormu irraa qabu agarsiisa,’ jette itti aantuun HRW deeskii Afrikaa Leslie Lefkow.
Mootummaan Itoophiyaa humna daangaa hin qabnetti dhimma bayuudhaan ummata nagaa ajjeesuu fi hidhuu akka dhaabuu; ammas namoota ajjeechaa kanaaf sababa ta’an hundi seeraaf akka dhiyaatan HRW gaafateera.
Gama biraatiin, mootummoonni addunyaa gocha mootummaa Itoophiyaa akka balaaleffatuu, namoonni hidhaman akka hiikkamanii fi badii Oromoo irratti raawwatamaa jirus qaamni walaba ta’e akka qoratuuf mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu godhuu akka qabu gaafate HRW.
Duumessi sodaa fi doorsisaan humna Agaazi jireenna isaanii dukkaneessuu jiraattonni naannoo Amboo fi Gincii AFP’tti himaniiru.
Dubbi-himaan mootummaa Itoophiyaa, Geetaachoo Raddaa, namni ajjeefamuu mitii hiriirri godhamee hin jiru jechuun BBC’tti hime. Mootummaa Itoophiyaa kan waan cufa waakkatuu fi badii isaatiifis addunyaa afaanitti qabatu ta’uu isaa sa’aa kanatti addunyaan hundi hubatteerti. Har’as wanti addaa ta’e tokko hin turre: Geetaachoo Raddaa kitaabuma kijibaa san irraa waa xiqqoo BBCf dubbiseeti kan deeme.
Yeroo kamuu caalatti mootummaan Woyyaanee biyya keessatti rukutamuu fi addunyaa irratti ammoo saaxilamutti jira. Qabsoo eegalleen hafuura dhabsiisuu fi yeroo muraasatti luka jalaa kaasuuf murachuu qabna.
Previous articleFunduratti malee duubatti; injifachuu malee jilbiifachuun Oromoo irraa kana booda hin eeggamu
Next articleOromoon osoo humna Agaaziin ajjeefamuu fi taankiin irratti bobbaafamu qabsoo isaa asiin gayuu Woyyaaneen hubachuu qabdi